रोचक श्रीमानलाई खुसी बनाउँन गर्नुहोस्, यी १० काम
Nepal Online Patrika: हरेक विवाहित महिलाको चाहना हुन्छ, उनी आफ्नो श्रीमानलाई खुसी राख्न सकुन् । तर कतिपय कारण र श्रीमानको भावनालाई बुझ्न नसक्दा श्रीमतीले श्रीमानलाई खुसी पार्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
फे’सबुक धेरै चलाउदा बढ्छ पति-पत्नी बीच मनमु’टाव
जब दम्पतीबीच सम्वाद हुन छा’ड्छ वा सम्वादको वातावरण बि’थोलिन्छ, तब स-साना अस’मझदारी बढ्छ । स-साना सम’स्याहरूको जन्म हुन्छ । त्यही सानो कुरा बिस्तारै हुर्कन्छ ।
श्रीमती ग’र्भवती भएपछि श्री’मानको भूमिका के हुन्छ ?
अहिले सबैको ध्यान को’रोनातर्फ मो’डिएको छ । एकातिर को’रोना भाइ’रसको सं’क्रमणको भ’य, अ’र्कोतर्फ अ’स्पताल आउ’जाउ गर्ने प्र’तिकुलता ।
कस्तो हुन्छन शरीरको कुन अंगमा कोठी भएका व्यक्ति ?
शरीरका विभिन्न अंग र त्यसको लक्षणका आधारमा व्यक्तिको चरित्र जान्न सकिने कुरा चर्चामा आइरहन्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित समुद्रशास्त्रमा यसबारे वर्णन गरिएको छ। शास्त्रमा धेरै माध्यम उल्लेख छन् ।